အမြန်ဆုံးအချိန် စက္ကန့် (၃၀) နှင့် သင့် နှလုံး ကောင်းမကောင်း အလွယ်တကူ စစ်ကြည့်နည်း – Zartiman
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အဓိက အကျ ဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ကို အမြဲ ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးနေဖို့ လို ပါတယ် ။တကယ်လို့ ဆေးခန်း သွားပြီး မစစ်ဆေး ခင်မှာ ကိုယ် တိုင် စစ်ဆေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေး ရှိပါ တယ်။ ။ဒီနည်း နဲ့ သင့် နှလုံး ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးဖို့ စက္ကန့် ၃၀ ပဲ အချိန်ပေး ဖို့ လိုပါ တယ်နော်…. ။
ပထမ အဆင့် အနေနဲ့ ရေဇလုံ တစ်လုံးထဲကို ရေ အပြည့် ထည့်ပြီး ရေခဲတုံးလေးတွေ ထည့်ပြီး ရေခဲတုံးတွေ အနည်းငယ် ပျော်သွားအောင် မွှေလိုက်ပါ ။ဒုတိယ အဆင့် အနေနဲ့ အဲ့ဒီ ရေဇလုံထဲမှာ လက်နှစ်ဖက် ကို နှစ်လိုက်ပြီး စက္ကန့် ၃၀ ထားလိုက်ပါ ။စက္ကန့် ၃၀ ကြာလို့ လက်နှစ် ဖက်ကို ထုတ်ကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ လက်ဖျား ထိပ်လေးတွေ နီနေတယ် ဆိုရင်တော့။
သင့်ရဲ့ နှလုံး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် ပါတယ် ။ သွေးလှည့်ပတ်မှု စနစ်လည်း ကောင်းမွန် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး ။ တ ကယ်လို့ သင့်လက်ဖျား ထိပ်လေးတွေက ဖြူဖျော့ ပြီး အပြာရောင် ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှု ဆိုင်ရာ ကျန်း မာရေးက စိုးရိမ်စရာ အနေအထားမှာ ရှိနေ ပါတယ် ။
ဒါက သင့်သွေးထဲမှာ အောက်စီဂျင် ပါဝင်မှု နည်းနေတာ ဖြစ်ပြီး ဒီ အနေအထား ကို မကုသပဲ ကြာလာရင် နှလုံး ကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက် လာစေနိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီး ဆေးစစ်သင့် ပါတယ်။
ခရက်ဒစ် အန်တီမေ RAY
လူတဈယောကျရဲ့ နှလုံးဟာ ခန်ဓာကိုယျ ရဲ့ အဓိက အကြ ဆုံး အစိတျအပိုငျး တဈခု ဖွဈပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ နှလုံးကနျြးမာရေး ကို အမွဲ ဂရုတစိုကျ စဈဆေးနဖေို့ လို ပါတယျ ။တကယျလို့ ဆေးခနျး သှားပွီး မစဈဆေး ခငျမှာ ကိုယျ တိုငျ စဈဆေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေး ရှိပါ တယျ။ ။ဒီနညျး နဲ့ သငျ့ နှလုံး ကောငျးမကောငျး စဈဆေးဖို့ စက်ကနျ့ ၃၀ ပဲ အခြိနျပေး ဖို့ လိုပါ တယျနျော…. ။
ပထမ အဆငျ့ အနနေဲ့ ရဇေလုံ တဈလုံးထဲကို ရေ အပွညျ့ ထညျ့ပွီး ရခေဲတုံးလေးတှေ ထညျ့ပွီး ရခေဲတုံးတှေ အနညျးငယျ ပြျောသှားအောငျ မှလေိုကျပါ ။ဒုတိယ အဆငျ့ အနနေဲ့ အဲ့ဒီ ရဇေလုံထဲမှာ လကျနှဈဖကျ ကို နှဈလိုကျပွီး စက်ကနျ့ ၃၀ ထားလိုကျပါ ။စက်ကနျ့ ၃၀ ကွာလို့ လကျနှဈ ဖကျကို ထုတျကွညျ့ လိုကျတဲ့ အခါ လကျဖြား ထိပျလေးတှေ နီနတေယျ ဆိုရငျတော့။
သငျ့ရဲ့ နှလုံး ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျ ပါတယျ ။ သှေးလှညျ့ပတျမှု စနဈလညျး ကောငျးမှနျ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ စိတျပူစရာ မရှိပါဘူး ။ တ ကယျလို့ သငျ့လကျဖြား ထိပျလေးတှကေ ဖွူဖြော့ ပွီး အပွာရောငျ ဖွဈနတေယျ ဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ နှလုံးနဲ့ သှေးလှညျ့ပတျမှု ဆိုငျရာ ကနျြး မာရေးက စိုးရိမျစရာ အနအေထားမှာ ရှိနေ ပါတယျ ။
ဒါက သငျ့သှေးထဲမှာ အောကျစီဂငျြ ပါဝငျမှု နညျးနတော ဖွဈပွီး ဒီ အနအေထား ကို မကုသပဲ ကွာလာရငျ နှလုံး ကနျြးမာရေး ကိုပါ ထိခိုကျ လာစနေိုငျတာကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွပွီး ဆေးစဈသငျ့ ပါတယျ။
ခရကျဒဈ အနျတီမေ RAY
ရန်ကုန် မှာ ကိုဗစ်ထက် ပိုဆိုး လာနိုင်တဲ့ တိတ်တဆိတ် ဇီဝိန်ခြွေ သမား ရောက်ရှိနေတာ သိကြလား
ဖုန်းတွေမှာ အင်တာန က် မသုံး ဘဲ ငွေဖြတ်ခံနေရရင် မဖြစ်အောင် ဒါတွေ လုပ် ပါ